धुलोले आजित ! « Naya Page
धुलोले आजित !
‘सुविधा हुन्छ भनेर सडक छेउ घर बनाइयो, अहिले ठूलो गल्ती गरें जस्तो लागिरहेको छ’
प्रकाशित मिति : 20 March, 2019 1:09 pm
साँखु, ६ चैत । चाबहिलबाट शंखरापुरको छापभन्ञ्याङ हुँदै मेलम्ची पुग्ने सडक छेउ ठूलो बस्ती बसिसक्यो । यातायातको सहजता र बन्द व्यापार हुने भएकाले सडक केन्द्रित वस्ती यस्तै ठाउँमा विस्तार हुने गर्छ र यहाँ पनि यस्तै भएको हो । शंखरापुरवासीले शहरको सुविधा खासै पाएका छैनन् । अधिकांशलाई धुलो सताएको छ ।
शंखरापुर नगरपालिका–२ जहरसिंह पौवाका अजय चौलागाईं भन्छन्, ‘सडक छेउमा निकै सुविधा र सहज हुन्छ भनेर घर बनाएँ । अहिले सडकको अवस्था र धुलोका कारण निकै ठूलो गल्ती गरें जस्तो लागिरहेको छ ।’ धुलोले प्रदूषण निकै बढाएको छ । धुलोले घर पूरै कुरुप बनेको छ । कच्ची सडक छेउमा घर हुनु भनेको सास्ती खेप्नु बाहेक केही नरहेको चौलागाईं बताउँछन् ।
चाबहिलबाट साँखु ११ दशमलव ४६ किलोमिटर र साँखुदेखि मेलम्ची करीव २९ किलोमिटर कच्ची सडकखण्ड हो । सडकमा बाक्लो धुलो उड्छ । मेलम्ची पुग्ने छोटो सडक भएकाले उक्त सडकखण्डमा यातायातको चाप निकै छ । नियमित गुडने सवारीसाधनले उडाएको धुलोको कारण स्थानीय बासिन्दा आजित भएका छन् ।
शंखरापुर–१ नाङलेभारेका एकादत्त दंगाल भन्छन्, ‘श्वास फेर्न समेत गाह्रो छ । दिउँसै झ्यालढोका थुनेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । जाडो महिनामा केही सहज त हुन्छ तर, गर्मी बढेसँगै न झ्यालढोका थुनेर भित्र बस्न सकिन्छ न त बाहिर नै बस्न सकिन्छ ।’
शंखरापुर नगरपालिका पांग्रेबासकी सिलसिला ढकालले कपडा धोएर सुकाउन समेत नपाउने गुनासो पोखिन् । ‘धुलोले आँगनमा कपडा सुकाउन सकिँदैन, अन्त लैजाने ठाउँ छैन, सडक कहिले बन्छ टुङ्गो छैन’, उनको प्रश्न थियो, ‘कहिलेसम्म यस्तो समस्या खेपेर बस्नुपर्ने हो ?’
जहरसिंह पौवाका नवराज ओझाले संविधानले आमनागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि आफूहरु सोही अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरे । शंखरापुर नगरपालिकाको प्रायःजसो क्षेत्र धुलोको प्रदूषणबाट आक्रान्त छन् । कतै कतै मान्छे नै ठम्याउन नसक्ने स्थिति आउने भएकाले यात्रा निकै सकसपूर्ण हुने गरेको यात्री लक्ष्मण दुलाल बताउँछन् ।
शंखरापुर भारेगाउँका मनोज दंगाल भन्छन्, ‘मान्छे नचिन्ने धुलोका बीच यात्रा गर्दा बिमारी नै भइन्छ । यसरी कति वर्षसम्म हामीले धुलो खानुपर्ने हो ?’ सडक बनाउन नसके ट्याङ्करबाट पानी खन्याएर धुलो मारे पनि निकै राहत पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
चाबहिलबाट साँखुसम्म २२ मिटर चौडा चार लेनको सडक बनाउने योजनासहित अहिले धमाधम निर्माण कार्य भइरहेको उनले बताए । कालोपत्रका लागि गिट्टी राख्ने काम भइरहेको छ । अब छिट्टै सडकको निर्माण सम्पन्न हुने श्रेष्ठको विश्वास छ ।
दैनिक एक हजारभन्दा बढी सवारी आवतजावत गर्ने यस सडकखण्डमा पानी पर्दा हिलाम्मे र घाम लाग्दा धुलाम्मे हुने गरेकाले सवारी एवं पैदलयात्रु आवतजावतमा समस्या पर्ने गरेको दक्षिणढोकाका स्थानीयवासी नानुमैयाँ खड्काले बताइन् ।
सडक नबन्दा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुका लागि त झन् धेरै समस्या छ । धुलोका कारण पहिलेको तुलनामा ८५ प्रतिशत व्यापार घटेको नारायणटार डेरीका भीमसेन सापकोटा बताउँछन् । अहिले व्यापार घटेर भाडा तिर्नै नपुग्ने अवस्था पुगेको भन्दै उनले सडक निर्माणमा तीव्रता दिन आग्रह गरिन् ।
महानगरीय प्रहरी प्रभाग साँखुका अनुसार जोरपाटी, साँखु हुँदै मेलम्चीसम्म दैनिक २५० भन्दा बढी टिप्पर गुड्छन् । सडकको अवस्था नाजुक र गाडीको चाप अत्यधिक भएकाले प्रायः उक्त सडकखण्डमा सवारी दुर्घटना हुने गरेको प्रभागकी प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मी खनालले जानकारी दिइन् ।
साँघुरो सडकमा भार बोकेका टिप्परले झनै धेरै धुलो उडाउने गर्छन् । यस अतिरिक्त दैनिक सयौंको संख्यामा अन्य सवारीसाधन गुड्दा वायु प्रदूषण बढ्छ नै । लामो समयदेखि धुलोको समस्या खेपेका शंखरापुरवासीको एउटै माग छ-सडक छिटो बनाइदेओस् । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार लागोस् ।